Taliska Ciidamada Itoobiya: “Waxaan dhisaynaa saldhig ciidan badeed ka agdhow Badda Cas iyo Badda Indiya … ma jirto sabab aan bad la’aan u sii ahaano” – Radio Daljir
Taliska Ciidamada Itoobiya: “Waxaan dhisaynaa saldhig ciidan badeed ka agdhow Badda Cas iyo Badda Indiya … ma jirto sabab aan bad la’aan u sii ahaano”
Noofember 8, 2018 8:25 g 0
Janaraal Berhanu Jula, Taliye Kuxigeenka ciidamada Itoobiya, oo warbaahinta Itoobiya maanta la hadlay ayaa daaha ka rogay qorshaha Itoobiya iyo sidii loo meelayn lahaa saldhig ciidan badeed iyo maraakiibtooda. Janaraal Berhanu Jula ayaa yiri, “dowladda Itoobiya waxaa u qorsheysan in ay dhisato saldhig ciidan badeed ka agdhow Badda Cas iyo Badda Indiya.” Janaraalka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku daray, “waxaa wada hadal noo socdaa waddamo sidii aan mar kale dhidbaha ugu taagi lahayn ciidan badeed leh awood iyo meel uu dego.”
Itoobiya waxa ay hore u lahayd saldhig ciidan badeed iyo maraakiibta ciidamada badda, xaruntooduna waxa ay ahaan jirtay Eriteriya. Eriteriya ayaa 1991 ka go’day dalka Itoobiya, haddana ah dowlad madax bannaan. Itoobiya iyo Eriteriya oo awal xiriirkoodu aad u xumaa ayaa hadda bilaabay isu soo dhawaansho dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Hoos ka daalaco jaraa’idka Addis Standard oo bartooda Twitterka ku soo qoray hadalka Janaraal Berhanu Jula.
Janaraal Berhanu oo faahfaahinya sababta kallifaysa in Itoobiya oo aan bad lahayn ay yeelato ciidan badeed ayaa ku jawaabay, “waa in aan badaha saameyn ku yeelanaa. Waddamo baa maanta meelo fogfog ka imaanaya oo saameyn ku yeeshay badaha naga agdhow. Waxaan nahay dal weyn oo awood leh oo tiro ahaan 100 milyan oo qof kor u dhaafay. Ma jirto sabab aan bad la’aan u sii ahaano.”
Hoos ka daalaco qorshaha iyo hadalka janaraalka iyo waliba qorshaha ciidamada dowladda Itoobiya oo faahfaahsan.
Ethiopia plans to build naval base: Having the vision to build modern and stronger armed forces, the government of…
Posted by EPRDF official on Wednesday, November 7, 2018
Haddaba su’aal muhiim ah baa waxay tahay xaggee iyo habkee bay Itoobiya saldhig ciidan badeed ka dhidban kartaa?
Waa su’aal jawaaba badan, waana mid farta ku fiiqaysa heshiiska ay dhawaan xamar ku wada galeen Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal Wasaare Abiy Axmed.
Waxaa kale oo xusid mudan iyo barmaajika Martisoor ee maanta ka baahay Radio Daljir, uuna marti u ahaa aqoonyahan Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil uu ku faahfaahiyey qorshaha ay Itoobiya damacsantahay si ay ula wareegto dalka Soomaaliya.
#RadioDaljir MARTISOOR waraysi ku saabsan:
– Khilaafka #FGS iyo #FMS socdayna ilaa 2017
– Faragelinta qaawan #FGS kuhayso dorashooyinka #FMS
– Doorashada #SWS iyo qalalaasaha #Baydhaba ka socda
– Heshiisyada halista ah #FGS ay saxeexday oon la horgayn #BF
— Abdisalam Ismail (@abdisalamisma1) November 8, 2018
Hoos ka dhegayso barnaamijka Martisoor oo aqoonyaha Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil ku soo bandhigay qorshaha ay Itoobiya meeleegayso si ay Soomaaliya ula wareegto.
Warbixin an ka diyaarinay halkan kadaawo
Siyaasadda & Dhaqaalaha 404 Wararka 13326